» नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग २ (भिडियो)
नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग २ (भिडियो)
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार १४:१०
मकवानपुर, १६ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको दोस्रो भागमा नकआउट राउण्डका लागि छानिएका ४ जना प्रतियोगीहरु करण दोङ, साईकिरण लम्साल, याङ्की योल्मो र डम्बर हिङमाङका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नकआउटका लागि छानिएका अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
करण दोङ,जोरपाटी, काठमाडौँ – ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका पाँचौँ प्रतिस्पर्धी हुन् जोरपाटीका करण दोङ । ब्याटलमा करणले श्रवणकुमार अधिकारीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘पश्चताप’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका करणले नकआउटका लागि बाजी मारे । करणको यात्रा भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनदेखि नै सुरु भएको हो । ब्लाईन्ड अडिसनमा उनको गीत सुनेर चारै जना कोच फर्किएका थिए । उनी कोच राजुको टिममा छन् ।
साईकिरण लम्साल, काँकटभिट्टा, झापा– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका छैटौँ प्रतिभा हुन् झापाका साईकिरण लम्साल । ब्याटलमा सुस्मा विश्वकर्मासँग साँगितिक ब्याटल गरेका साईकिरणले नकआउटका लागि बाजी मारे । उनले ‘तिमी बिना बाँच्न गारो भो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ६ वर्षदेखि भजन गाउँदै संगीत क्षेत्रमा लागेका साईकिरण फिटनेस सेन्टर समेत चलाउँछन् । बुवा र श्रीमतीबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा पाएका साईकिरण सिजन २ मा चारैजना कोचलाई फर्काउन सफल प्रतियोगी समेत हुन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
याङ्की योल्मो, दार्जिलिङ– ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका सातौँ प्रतिभा हुन् दार्जिलिङकी याङ्की योल्मो । उनले ब्याटलमा अनिश महर्जनसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । यो साँगितिक भिडन्तलाई भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को निकै नै यादगार ब्याटलका रुपमा लिईन्छ । चारै जना कोचको स्ट्यान्डिङ अवेसन पाएको यो ब्याटल ‘सधैँ सधैँ आईरहन्छ’ बोलको गीतमा भएको थियो । निकै नै खारिएको यो ब्याटलमा याङ्कीले बाजी मारिन् अनि नकआउटका लागि छनौट भईन् । दार्जिलिङको आलुबारीबाट भ्वाईस अफ नेपालको दोस्रो सिजनमा सहभागी हुन आएकी याङ्कीको वास्तविक नाम याङ डोल्मो हो । हेलम्बुको सँस्कृतिसँग जोडिएकी याङ्की आफ्नो हजुरबुवालाई प्रेरणाको श्रोत मान्छिन् । ह्योल्मो सँस्कृतिको गीत समेत गाएकी २२ वर्षीय याङ्की चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल तेस्रो प्रतियोगी हुन् । उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
डम्बर हिङमाङ,सुनसरी – ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका आठौँ प्रतिभा हुन् सुनसरीका डम्बर हिङमाङ । ब्याटलमा उनले धर्मबज्र लामासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘अब यो बाटो’ बोलको गीतमा भएको यस ब्याटलमा डम्बरले बाजी मारेर नकआउटका लागि छनौट भए । भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा तुहिएको सपना साकार पार्न बलियो भएर आएका डम्बर कोच दिपको टिममा छन् । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
प्रकाश सपुतलाई ब्याटलमा टक्कर दिईन् यी युवतीले